Boqor Cabdilaahi Dabagooyeb& Maxamuud X Cumar Camey oo Buuhoodle lagu soo dhoweeyey (Sawiro) – Radio Daljir
Nofeembar 5, 2012 11:29 b 0
Buuhoodle Nov 5-2012-Waftigan madax dhaqameedka ah oo uu horkacayey boqor C/laahi Axmed Cali oo kamid ah isimada gobolka Cayn uuna qayb ka ahaa Maxamuud X Cumar Camey ?ayaa siweyn loogu soo dhoweeyey magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn.
Soo dhoweynta oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada, sida ururada haweenka, dhalinta sportga, ganacsato, arday iyo qaybaha bulshada dhamaantood ayaa sidoo kale waxaa ka dhexmuuqanayey qaybaha ciidamada sida bilayska & milatrayga.
Soo dhoweynta oo kasoo bilaabatay deegaanka Dandan oo 25 KM u jira Buuhoodle ayaa ugu danbayntii dadkii soo dhoweynta ka qayb ahaa waxay isugu yimaadeen garoonka kubadda cagta ee Buuhoodle.
Ugu horayn waxaa halkaasi ka hadlay qaar kamid ah dadkii soo dhoweynta madax dhaqameedka ka qayb qaadnayey iyagoo si weyn usoo dhoweeyey madaxda dhaqanka.
SIdoo kale waxaa halkaasi ka hadlay Maxamuud X Cumar Camey oo kamid ah odayaasha deegaanka Buuhoodle waxaana halkaasi uu kasoo jeediyey hadalo kooban.
Ugu danbayn waxaa halkaaasi ka hadlay Boqor Cabdilaahi Axmed Cali oo hogaaminayey waftiga hogaaminayey.
Waftigan madax dhaqameedka ah ee maanta soo gaadhey Buuhoodle ayaa mudooyinkii danbe ku sugnaa magaalada Garoowe ee caasimada Puntland, iyagoo horay uga soo kici timay magaalada Muqdisho oo ay uga qayb galeen shirarkii lagu dhisayey dawlada Soomaaliya ee looga gudbey nidaamkii KMG oo dalka Soomaaaliya kusoo jirey mudo 12 sano ah.